Fikarohana momba ny firaisana Tantaran'ny Fiainana lasa Famonoana Famonoana Tambabe sy Phobias, Fiovan'ny Fivavahana & Drafitry ny Fiainana: Raharaha Reincarnation iray Fandresen'ny Camp Concentration jiosy | Teuvo Koivisto - Fikarohana Reincarnation
Notadiavin'i Rita Castren sy Ian Stevenson, MD
From: Ireo tranga Eoropeana amin'ny endrika zarindravao, nataon'i Ian Stevenson, MD
Ny drafitry ny fanahy: Vehivavy kristianina bevohoka manana faminaniana mampiseho ny zanany zanany dia Jiosy
Teuvo Koivisto dia teraka ho fianakaviana kristiana Lutheran any Helsinki, Failandy tamin'ny Aogositra 20, 1971. Ny anaran-drainy dia i Jan sy i Lusa no reniny.
Nandritra ny maha-bevohoka an'i Teuvo azy dia nanonofy i Lusa izay tao anatin'ny andian-gadra izay nandroso. Nisy olona avy eo nilaza tamin'i Lusa hoe "Mialà eo ambanin'ny mololo." (1)
Avy eo izy dia nahita lehilahy iray izay nitanisa ny Kabbalah, boky jiosy fahiny momba ny fampianarana mystika. Tao ambadika, nisy lehilahy nitifitra basy. Avy eo dia niteny tamin'i Lusa ilay lehilahy miaraka amin'i Kabbalah hoe, "Ny zazalahy izay andrasanao dia Jiosy ary hovonjeko ny ainao." (2)
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: tsy mahatadidy sary an-tsaina avy amin'ny tobin'ny tobin'ny nazia i Teuvo: efitrano fidiovana, lafaoro ary tariby misy barbed
Rehefa taona 3 i Teuvo, dia nilaza tamin'ny reniny fa mbola velona izy taloha. Avy eo izy dia nilaza tamin'i Lusa mikasika ilay "lafaoro lehibe", izay nanangonan'ny olona tamim-pitandremana ny olona. Nilaza izy fa nisy ny sasany nandainga. (3) Nampiasa ny tanany i Teuvo mba hampisehoana an'i Lusa ny endriky ny fatana.
Teuvo nanazava fa nilazana izy fa nentina tany amin'ny "efitra fandraisam-bahiny", saingy nentina tany amin'ny fatana izy. (4) Nolazaina avy eo ny olona hanala ny akanjo sy ny loko volamena ary ny solomaso dia nesorina tamin'izy ireo. Natao tao anaty lafaoro àry ny olona. Teuvo avy eo dia nilaza fa nivoaka avy tao amin'ny rindrina ny entona ary tsy afaka niaina izy. Teuvo dia nanoritsoritra "oven" miaraka amin'ireo ankizy ao aminy. (5)
Fihetseham-pihetseham-po avy amin'ny fiainana an-davan'andro
Hoy i Lusa, rehefa nilazalaza an'ireny zava-nitranga tao amin'ny toby fitan-tany alemà iray tamin'ny Ady Lehibe II ireny: "Tena natahotra" sy "natahotra" i Teuvo. (Tezitra koa i Teuvo).
Niseho tamin'i Lusa fa tezitra i Teuvo rehefa nanandrana nifoka rivotra. Nitranga nandritra ny minitra 10-15 ireo fanafihana ireo. Nalain'i Lusa tamin'ny dokotera iray i Teuvo, izay tsy nahita izay ratsy ara-batana tamin'i Teuvo. Ilay dokotera nilaza taminy fa tsy nanana asthma i Teuvo.
Taoriana kelin'izay, dia nilaza tamin'i Lusa i Teuvo hoe: "Nalaiko tamin'ny tady aho. Avia ary avelao aho. "(7) Lusa nanamarika fa toa kivy i Teuvo rehefa niresaka momba ny tariby tariby izy.
Mijoro ho vavolombelona i Lusa fa tsy nianatra momba ny tobin'ny fifantohana tamin'ny heviny ara-dalàna ny Teuvo
Nanomboka tamin'ny 3 taona i Teuvo dia niverimberina niresaka momba ireo fahatsiarovana tao amin'ny toby fitanana nandritra ny fe-potoan'ny 6 volana.
Lusa dia nilaza tamin'ireo naman'ny Fiangonana fa ny Teuvo dia tsy nianatra ny sehatra avy amin'ny toby fitanana amin'ny fomba mahazatra. Tsy dia navela hijery fahitalavitra i Teuvo ary tsy navela hijery programa misy herisetra mihitsy izy. Tsy nisy na dia iray aza tao amin'ny fianakaviana no niresaka momba ny Tobin'ny Holocaust na ny toby fitanana, ary tsy nanana fifandraisana ara-tsosialy tamin'ireo Jiosy jiosy izy ireo.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha an'i Teuvo: famaritana marina momba ny toby fitanana nazia
Rehefa nikaroka ity tranga ity i Ian Stevenson dia nanamafy fa ny tranga tao Teuvo dia marina ho an'ny toby fitanana alemana. Ny Alemà dia nisaraka tamin'ireo ankizy tamin'ny taona 14 avy amin'ny gadra hafa, satria ireo tanora ireo dia heverina ho tanora ho mpiasa mahasoa. Novonoina ny ankizy rehefa nodorany na nodorany.
Ny efitra fisakafoanana koa dia nampiasaina hamono ireo Jiosy, izay nilazana tokoa fa nentina tany amin'ny "efitra fandraisam-bahiny" izy ireo. Nesorina ny jiolahy ary nokasaina ny solomaso, mba hahafahan'ny Alemà ampiasain'ny akanjo sy solomaso rehefa maty izy ireo. Raha vantany vao napetraka tao amin'ny trano fisotroana ireo voafonja dia nampiasaina hamonoana azy ny gazy cyanide hydrogène. Ny gisao volamena sy ny solomaso dia nesorina tao amin'ny faty, izay nipetrahan'izy ireo avy eo nifampitohitohy tao anaty fatana, izay nodorana azy ireo. Nanodidina ny toby ny sahoan-dronono ary nizara fizarana samihafa tao amin'ny toby. Raha ny fitambarany, ny fahatsiarovan'i Teuvo dia marina ho an'ireo toby fitanan'i Alemana tamin'ny Ady Lehibe II.
Ny fiainana taloha niafina ny fihetsika vokatry ny Holocaust
Matetika i Teuvo no nanafina ny tenany tamin'ny mbola kely, ka tsy nahita azy ny ray aman-dreniny. Ny rindrin'ny tranobe misy azy dia tena lafo ary i Ando dia nanapaka rindrina izay nanasaraka ny efitrano mba hahafahany miafina ao amin'ny efamira malalaka eo anelanelan'ny efitrano.
Nitohy ny fihetsika niafaran'i Teuvo mandra-pahatongany 13 hatramin'ny 14 taona. Rehefa niteny taminy tao amin'ny 1999 i Ian Stevenson, fony Teuvo taona 28, dia nilaza tamin'i Stevenson fa te-hahatsiaro ho voaro foana izy ary na dia tamin'ny taona 28 aza dia tsy tiany ny toeram-ponenany satria tsy nisy toerana miafina.
Ian Stevenson dia nanamarika fa ny fihetsika niafin'i Teuvo dia mety mifandraika amin'ny paikady izay nafenina tamin'ny Nazia. Tao amin'ny Ghetto tao Warsaw, ny Jiosy dia nandrava ny rindrina teo anelanelan'ny trano fialofana mba hahafahan'izy ireo miala avy amin'ny trano iray mankany amin'ny iray hafa raha tsy hita. Amin'izany fomba izany dia afaka manosotra ny fananany sy ny fitaovany izy ireo manerana ny tranobe iray manontolo amin'ny fomba miafina. Azon'izy ireo atao koa ny manafina ny toeran'ny Nazia ao anaty toeram-pialokalofana eo anelanelan'ny rindrina.
Fiainana taloha Phobia avy amin'ny Uniforms Nazi sy Swastikas
Rehefa nanadinadina azy tao amin'ny 1999 Ian Stevenson, dia nilaza taminy i Teuvo fa mbola nanan-tahotra sy tebiteby izy raha nahita ny fanamiana Nazia na ny swastika. Teo dia natahotra i Teuvo tamin'io fotoana io. Mifanohitra amin'izany fa tsy natahotra ny sainam-pirenena Britanika na Frantsay i Teuvo.
Mahatsiaro ny tranga i Teuvo Anne Frank | Barbro Karlen, toa an'i Barbro koa dia nanana tahotra ny fanamiana, na dia teo aza ny tranga nisy azy, nisy fanamiana. Barbro dia nanoritsoritra fa raha nogadrain'ny mpitandro filaminana izy noho ny fanitsakitsahana ny fifamoivoizana, dia ho nanjary natahotra izy ary mety handinika ny fialàna amin'ny polisy. I Barbro tenany dia lasa polisy poloney Soedoà, amin'ny ampahany, mba handresy ny tahotra ny fanamiana.
Voalohany indrindra, te-haneho hevitra momba ny toetra tena mahavariana amin'ity tranga ity aho. Na dia tsy voamarina ara-tantara aza ny fiainan'i Teuvo teo aloha, dia tsy azo alaina ny filazalazany marina, tamin'ny taonan'ny 3, tamin'ny fiainana tao amin'ny toby fitanana alemana. Nanamafy i Lusa reniny fa tsy afaka nianatra momba ireo toby ireo i Teuvo tamin'ny fomba mahazatra. Noho izany, ny androm-piainany taloha izay niainany ny toby fitanana dia ny hany fomba hanazavany ny fahatsiarovany sy ny fahalalany.
Raha raisina izany dia mampiseho ireo singa manaraka ireto ity tranga ity:
Drafitra fanahy sy fandraisana anjara amin'ny fanahy: Avy any amin'ny tontolon'ny fanahy i Teuvo dia toa nanomana ny fomba fiainany ho avy, araka ny asehon'ny nofin'ilay reniny rehefa bevohoka izy. Noho izany, ity tranga ity dia mampiseho fa ny fanahy dia afaka manangana fiainana lava ary mampita ny tetikasany amin'ny fanambarana nofinofy.
Tao anatin'io nofinofy io, dia nahita vondrona voafonja i Lusa. Nisy lehilahy iray misy dika mitovy amin'ny Kabbalah avy eo dia nilaza taminy fa ny zazakely izay niandrasany dia Jiosy. Satria Lusa sy ny vadiny dia Kristiana, nofinofy tsy mahazatra izany, nefa hita fa tanteraka tamin'ny nahaterahan'i Teuvo sy ny fahatsiarovany ny maha Jiosy tany amin'ny toby fitanana Alemana.
Fiafaram-piainana taloha teo amin'ny Holocaust: Nanana tahotra sy tebiteby i Teuvo raha nahita ny fanamiana alemana, saina na swastika. Teo dia natahotra i Teuvo tamin'io fotoana io. Mifanohitra amin'izany fa tsy natahotra ny sainam-pirenena Britanika na Frantsay i Teuvo.
Araka ny efa nomarihany, Barbro Karlen koa dia nanana tahotra ny fanamiana mifandraika amin'ny traikefa niainany taloha tamin'ny naha zazavavy jiosy azy tamin'ny Ady Lehibe II, izay nenjehan'ny Nazia.
Fiovan'ny Fivavahana: Ny ankamaroan'ny olona maty tany amin'ny toby fitanan'i Nazi dia jiosy. Raha nanaiky i Teuvo fa vao tafiditra tao amin'ny toby fitanan'i Nazi izy dia nogadraina tao amin'ny toby fitanan'i Nazi, dia mampiseho fa ny fanahy iray dia afaka manova fivavahana avy amin'ny fiainana iray manontolo, tahaka an'i Teruu dia teraka ho an'ny ray aman-dreny kristianina.
Izany tranga izany ihany no notsongaina tamin'i Anne Frank | Barbro Karlen, raha nahatsiaro i Barbro fa nenjehina nandritra ny androm-piainany nandritra ny androm-piainany an'i Anne Frank, nefa tamin'ny vanim-potoana ankehitriny, dia teraka ho an'ny ray aman-dreny kristianina izy. Matetika aho no nanamarika fa raha ny vahoaka Alemana ao amin'ny 1930 sy ny 1940 dia nahafantatra fa mety ho teraka Jiosy tamin'ny fanabeazana iray ary kristiana amin'ny iray hafa, dia tsy ho nisy mihitsy ny Holocaust.
(1) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 159
(2) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 159
(3) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 160
(4) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 160
(5) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 160
(6) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 160
(7) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 160